Zarao Amin'Ny Windows Ny Toerana Misy Ahy - Torolàlana Sy Fitaovana An-Tserasera
Zarao Amin'Ny Windows Ny Toerana Misy Ahy
Mitadiava torolàlana momba ny fizarana ny toerana misy anao avy amin'ny Windows. Ary ampiasao ny fitaovana an-tserasera maimaim-poana hitadiavana, hamadika ary hizara ny fandrindrana sy adiresy GPS.
Raha hampiasa ity fitaovana ity dia tsy maintsy manaiky ny Fepetraky ny serivisy sy Politika Fiarovana fiainan'olona anay ianao.
Voaaro amin'ny tsiambaratelo
Mamorona fitaovana an-tserasera azo antoka izahay izay mifototra amin'ny rahona na ampiasaina eo an-toerana amin'ny fitaovanao. Ny fiarovana ny fiainanao manokana dia iray amin'ireo zava-dehibe indrindra amin'ny famolavolana ny fitaovantsika.
Ny fitaovanay an-tserasera izay miasa eo an-toerana amin'ny fitaovanao dia tsy mila mandefa ny angonao (ny rakitrao, ny angon-drakitrao na ny horonan-tsary, sns.) amin'ny Internet. Ny navigateur mihitsy no manao ny asa rehetra eo an-toerana, ka mahatonga ireo fitaovana ireo haingana sy azo antoka. Mba hanatrarana izany dia mampiasa HTML5 sy WebAssembly izahay, endrika kaody izay ataon'ny mpitety tranonkala ahafahan'ny fitaovantsika manatanteraka amin'ny hafainganam-pandeha akaiky.
Miasa mafy izahay mba hampandeha ny fitaovanay eo an-toerana amin'ny fitaovanao satria azo antoka kokoa ny fisorohana ny fandefasana angona amin'ny Internet. Indraindray anefa dia tsy mety tsara na azo atao izany ho an'ny fitaovana izay mitaky hery fanodinana avo lenta, mampiseho sarintany mahafantatra ny toerana misy anao ankehitriny, na mamela anao hizara data.
Ny fitaovana an-tserasera mifototra amin'ny rahona dia mampiasa HTTPS mba hanafenana ny angona nalefanao sy alaina avy amin'ny fotodrafitrasa rahonay, ary ianao irery ihany no afaka miditra amin'ny angonao (raha tsy hoe nisafidy ny hizara izany ianao). Izany dia mahatonga ny fitaovanay mifototra amin'ny rahona ho azo antoka.
Raha mila fanazavana fanampiny dia jereo ny Politika Fiarovana fiainan'olona.
Fampidirana ny mpandrindra latitude sy lava
Ny mpandrindra Latitude sy longitude dia ampahany amin'ny rafitry ny fandrindrana ara-jeografika izay ahafahana mamantatra ny toerana rehetra eto ambonin'ny tany. Ity rafitra ity dia mampiasa ny valan-jaza manarona ny Tany. Mizara amin'ny tsipika iray io vovo-javamaniry io ary ny teboka tsirairay avy eto ambonin'io lafiny io dia mifandraika amin'ny latitude sy longitude manokana, sahala amin'ny teboka tsirairay amin'ny fiaramanidina cartesianina iray dia mifandraika amin'ny x sy y mpandrindra. Ity tsipika ity dia mizara ny velaran'ny Tany miaraka amina andalana roa izay mihazakazaka mifanelanelana amin'ny ekoatera ary avy any amin'ny Pole Avaratra ka ny Pole Atsimo.
Ny tsipika mifanandrify amin'ny ekoatera, ary ny tsipika izay mandeha atsinanana miankandrefana, dia manana sanda maharitra iray. Izy ireo, araka ny tokony ho izy, antsoina hoe paramelo. Ny tsipika izay mihazakazaka eo ambonin'ny ekoatera dia mamaritra ny sandan'ny latitude 0. Mandeha any avaratra mankany amin'ny North Pole ny sandan'ny latitude miakatra 0 hatramin'ny 90 ao amin'ny North Pole. New York, izay eo afovoany eo anelanelan'ny ekoatera sy ny North Pole dia misy latitude 40.71455. Avy any amin'ny ekoatera mandeha atsimo, ny lanjan'ny latitude dia lasa miiba ary tonga hatramin'ny 90 any amin'ny South Pole. Rio de Janeiro has a latitude of -22.91216.
Ireo tsipika izay mandeha avy any amin'ny Tavaratra Avaratra ka ny Pole Atsimo dia manana lanja maharitra lava. Ireo tsipika ireo dia antsoina hoe meridian. Ny meridian izay mamaritra ny halavan'ny lanjany 0 dia mandalo Greenwich any Angletera. Mandeha miankandrefana avy any Greenwich, hoy ianao mankany Amerika, ny fiheverana lava dia lasa ratsy. Ny elanelam-pahavaratra dia andrefan'ny Greenwich mankany 0 ka hatramin'ny -180 ary ny soatoavina avo lenta mandeha 0 ka hatramin'ny 180. Miorina lava -99.13939 ny tanànan'i Mexico ary manana lava-laharana 103.85211 i Mexico City.
Ny mpandrindra Latitude sy longitude dia ohatra ampiasain'ny GPS. Amin'ny fotoana rehetra, ny toerana misy anao ankehitriny dia azo faritana mazava amin'ny alàlan'ny mpandrindra latitude sy longitude.
Torolàlana hizarana ny toerana misy anao amin'ny fitaovana sy fampiharana samihafa
Fitaovana an-tserasera mifototra amin'ny rahona na eo an-toerana izay mametraka ny fiainanao manokana sy ny tontolo iainana ho loha laharana
Fepetraky ny serivisyPolitika Fiarovana fiainan'olona
© 2022 itself tools. Zo rehetra voatokana.